Maxaa ku soo kordhay Caawa dagaalada ka socda Dalka Etoobiya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxaa ku soo kordhay Caawa dagaalada ka socda Dalka Etoobiya
.Isku dhacyo dhulka la xidhiidha oo khasaare ba’an gaystay ayaa maalintii labbaad ka socda Gobalka Konso ee Dabubka.Shaqaaqadan ayaa bilaabay kaddib markii ciiddamadii Milatariga ee halkaas joogay waqooyiga usoo baxeen.
2.Gollaha Federeshinka dalka ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay innaan wax wadda haddala lala gali doonin TPLF. Haddii lala galana ay wiiqayso guddashada waajibadka dastuuriga ee Dawladda dhexe.
3. Ciiddamada Milatariga Itoobiya ayaa sheegay innay goobo horleh maanta qabsadeen, waxayna xuseen in hawlgalka hadda kaddib la dardar galin doono.
4- Dawladda dhexe ayaa duqaymo ka fulisay Mekelle, Dawladdu waxay sheegtay innay xeryo ciiddan duqaysay halka maamulka ay sheegen in dad rayida la beegsaday.
5-Booliska dalka ayaa sheegay in Tplf iyo Onag Shane ay qorshaynayaan falal argagixiso oo ay Magaaloyinka ka fulin rabbaan. Booliska ayaa xusay in la qabtay dad baddan oo arrimahan looga shakisan yahay.
6-Maamulka Oromada ayaa sheegay innay bur-buriyeen 36-qof oo ka tirsanaa Jabhada ONAg Shane, waxayna xuseen in 169-qof maxaabis ahaan u qabteen.
7-Maamulka Benishangul Gumuz ayaa markale sheegay in dablay hubbaysan saddex qof maanta ku dhawacday Gobalka Metekel, Degmada Dubate.Dablaydan ayaa sabtidii gobalka ku dishay 34-qof.
8-Komishinka xuququl isaanka Itoobiya ayaa war maanta ay soosaareen walaac kaga muujiyay kiiska siyaasiga xidhan ee Lidatu Ayalew, oo aan wali go’aankii maxkamada loo fulinin.
9- Dawladda DJabuti ayaa war ay soo saartay ku taagertay hawlgalka Dawladda dhexe, waxayna carabka ku adkeeyeen in Abiye Ahmed ka shaqayn karo waddajirka iyo midnimada Itoobiya.
10- Madaxwaynihii horee Nigeria Olisengon Obasanjo ayaa Addiss-Ababa soo gaadhay, wuxuuna kamid yahay dad baddan oo daaha dabadiisa daddaalada wadda haddalo ka wadda, sidday warinayso AFP.
11-Hantilayal Masaariya oo $10-million ku maalgaliyay warshado Tigreega ku yaala ayaa wallaac ka muujiyey in dagaalku saameyo hantidooda, sidday warinayso Ahram Online.
12- Afhayeenka wasaarada arrimaha dibada dalka German-ka ayaa cambaareeyay gantaaladii ay TPLF ku dhufatay garoomada maamulka Axmaarada iyo Eritrea, waxayna ku baaqeen in xaalada la dajiyo lana gaadho xal siyaasadeed.
13-Wasiirka Arrimaha dibada Itoobiya, Demeke ayaa booqasho ku tagay dalalka Uganda iyo Kenya, siddoo kale madaxwaynaha dalka Itoobiya ayaa booqasha noocana ugu baxaysa dalalka Afrika.
14- Madaxwaynaha Uganda ayaa ka saaray qoraal uu bartiisa soo galiyay oo uu ahmiyada wadda hadddalada kaga hadlayay.
15- Dawlada maraykanka ayaa ugu Deeqdey Dayurad Nooca qumaatiga u kaca ah oo Kuwa milatariga ah.
16- Hub Fara badan oo Ay ciidamada milatarigu ka Qabteen TPLF.
Wixii xaaladda dalka kusoo kordha kala soco halkan.
Xigasho VOSS TV.
Previous articleMadaxwayne Qoorqoor oo wajahaya caqabadihii ugu cuslaa inta uu xafiiska joogay
Next articleEthiopia oo duqeysay caasimada Tigray madaama ay diiday baaqyada dhexdhexaadinta
Madaxweynaha xilka haya Donald Trump ma ogolaanayo doorashada wuxuuna balan qaaday in dacwado uu ka qaadan doono dhowr gobol. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa...
Munasabad balaaran oo lagu soo bandhigayay wax qabadka wasiirka wasaradda arimaha...